यो राम्रो छ वा खराब तपाईको एन्ड्रोइड फोन सँधै खुला रहनु हो? | Androidsis
तपाईको एन्ड्रोइड फोन सँधै खुला रहनु के खराब हो?
हाम्रो एन्ड्रोइड फोनको ब्याट्री वरिपरि सधैं मिथ्या र अफवाहहरू छन्। के बाट उपयुक्त कि यो पृष्ठभूमि को एक निश्चित प्रकार को उपयोग गर्न बाहिर जान्छ वा युक्तिहरू जुनसँग ब्याट्री बचत गर्नुहोस्। एक सामान्य बहस यो हो कि रातको समयमा वा समय समयमा फोन बन्द गर्न सल्लाह दिइन्छ। धेरै व्यक्तिको स्मार्टफोन हर समय हुन्छ। केहि भन्न को लागी एकैको लागि राम्रो छैन।
यी टिप्पणीहरूमा सत्य के छ? के यो वास्तवमै हाम्रो एन्ड्रोइड फोन सँधै चालु छ? वा यो Android मा ब्याट्री को बारे मा धेरै मिथ्या मध्ये एक हो? त्यसो भए हामी तपाईंलाई यी अफवाहहरूको बारेमा बढी बताउँछौं जुन हामी लामो समयदेखि बजारमा सुनिरहेका छौं।
तार्किक रूपमा, यो केहि छ जुन प्रत्येक प्रयोगकर्तामा निर्भर गर्दछ। तर सामान्य कुरा यो हो फोनको तुलनात्मक रूपमा भारी प्रयोग गरियो। यो दैनिक कल गर्न, ब्राउज गर्न, अनुप्रयोगहरू वा खेलहरू प्रयोग गर्न प्रयोग गरिन्छ, त्यसैले यो सामान्य छ कि त्यहाँ प्रयोगकर्ताहरू छन् जुन यसलाई कहिले पनि बन्द गर्दैन। केहीले यो रातमा बन्द गर्छन्। दुबै विकल्पहरूमा अनुयायीहरू जत्तिकै अवरोधकहरू छन्।
एउटा पक्ष जुन जुनसुकै बेला पनि विचार गर्नुपर्दछ कि स्मार्टफोन एक जटिल उपकरण हो। यो केवल कम्पोनेन्टहरूको समूहबाट मात्र बनेको छैन, तर हामी फोनको बारम्बार प्रयोग गर्छौं भने हामीसँग धेरै प्रक्रियाहरू छन्। तसर्थ, यो केहि हो जुन पहिरन उत्पन्न गर्दछ र जहिले पनि सबै फाँट्छ। यो त्यस्तो कुनै कुरा होईन जुन कुनै पनि केसमा अस्वीकार गर्न सकिन्छ। तर यस अर्थमा त्यहाँ केहि बढी संवेदनशील भागहरू छन्।
एन्ड्रोइड फोनको ब्याट्री एक कम्पोनेन्ट हो जसमा धेरैले लगाएको पोसाक याद गर्दछ। तसर्थ, त्यहाँ यस्ता केसहरू छन् जुनमा अधिक खपत देखिएको छ, आराममा पनि। वा तपाई देख्न सक्नुहुनेछ कि ब्याट्री सुरुमा भन्दा कम समय चल्दछ। यी पक्षहरू हुन् जुन प्रायः प्रयोगकर्ताहरूले उनीहरूको फोनमा कुनै समय अनुभव गरेका थिए। त्यसैले लगाउनु र च्यात्नु भनेको कुरा हो जुन फोन ब्याट्रीमा यसको टोल लिन समाप्त हुन्छ।
त्यसकारण, त्यहाँ धेरै विज्ञहरू छन् जसले टिप्पणी गर्छन् एक ब्रेक एन्ड्रोइड फोनको सन्दर्भमा समय-समयमा दिइनु पर्छ। एक ब्रेक जुन फोन बन्द गरी दिन सकिन्छ, प्रयोग नगरीकन केही बेर बस्न। त्यसोभए धेरै लगाई रहेका प्रक्रियाहरूलाई रोक्न बाहेक, लगाउने र फाल्ने कार्यलाई कम गर्न सकिन्छ, जुन केही क्षणमा असफल हुन सक्छ र फोनलाई केही अपरेटिंग समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ।
यद्यपि यो सम्भव छ कि त्यहाँ प्रयोगकर्ताहरू छन् जसले फोन बन्द गर्न सक्दैन, उदाहरणका लागि कार्यको कारणका लागि। त्यसकारण, त्यस्ता केसहरूमा एन्ड्रोइड फोनका साथ प्रयोगकर्ताहरूका लागि, सिफारिश भनेको फोन पुन: सुरू गर्नु हो. केवल यो धेरै बगहरू सच्याउने तरिका हो यसमा देखा पर्ने दौडमा, यसलाई एक सानो ब्रेक दिन पनि यो एक तरिका हो। केहीले यो दावी गर्दछ कि यसले तपाईंको फोनको जीवन सुधार गर्न सक्छ।
यो प्रमाणित भएको कुरा होईन, तर धेरै विशेषज्ञहरू आरउनीहरूले हप्तामा दुई पटक फोन पुनः सुरु गर्न सल्लाह दिन्छन्। ताकि यो सम्भव छ कि अपरेशनलाई अपरेशनको सर्तमा आराम गर्न। यो सबैले गर्न सक्ने कुरा हो यो पनि यदि तपाईंसँग गैर-हटाउन योग्य ब्याट्रीको साथ स्मार्टफोन छ। यद्यपि यो अनिवार्य छैन। यदि प्रयोगकर्ताले प्राय: तिनीहरूको फोन बन्द गर्दैन भने, यो फोनमा खराब प्रदर्शन गर्ने चिन्ह पनि होईन। तर यस्तो सम्भावना छ कि यसले त्यस्तो पहिरो सहनु पर्छ।
रातमा तपाईंको एन्ड्रोइड फोन बन्द गर्ने विषयमा आज त्यहाँ धेरै बहस छ। धेरैले यो फोनमा ब्याट्री जीवन बचत गर्ने तरिकाको रूपमा सिफारिश गर्दछन् र फोन र यसका कम्पोनेन्टहरूले आज दु: ख पाइरहेका पोशाकलाई कम गर्छन्। तर यो एक मात्र कारण होईन जुन यस सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्दछ।
यस अर्थमा यो छ धेरै आफ्नो Android फोनमा धेरै प्रयोगकर्ताको निर्भरताका साथ गर्नका लागि। त्यहाँ प्रयोगकर्ताहरूका लागि केहि सल्लाहहरू छन् जुन तिनीहरू सक्छन् तपाईको फोनमा निर्भरता कम गर्नुहोस्, कसरी प्रयोग गर्ने मोड अवरोध नगर्नुहोस् सबै समयमा। तर रातमा फोन बन्द गर्नाले विचार गर्नुपर्ने अर्को पक्ष पनि हो। केही केस बाहेक, प्रयोगकर्ताहरू दिनको २ 24 घण्टा उपलब्ध हुनु आवश्यक पर्दैन।
यसको लागि, तिनीहरूसँग फोन जहिले पनि हुनु आवश्यक छैन। त्यसैले कहिलेकाँही यसलाई राम्रो लाग्दछ कि यो बन्द भएको छ र फोनबाट ब्रेक पनि छ। यो त्यस्तो चीज हो जुन रातमा गर्न सकिन्छ यदि चाहनुहुन्छ भने र रातमा कुनै अप्ठ्यारो नहोस्, यद्यपि सबैले छनौट गर्न सक्दछन् जब उनीहरू आफ्नो एन्ड्रोइड फोन बन्द गर्न चाहन्छन्। तर यो केहि अवसर मा सिफारिस गरिएको छ। प्रश्नमा फोनको जीवन विस्तार गर्न यति धेरै होइन, तर आफैंको लागि थोरै समय लिनको लागि, जुन ठूलो महत्वको पनि हो।
लेखको पूर्ण मार्ग: Androidsis » ट्यूटोरियलहरू » ब्याट्री » तपाईको एन्ड्रोइड फोन सँधै खुला रहनु के खराब हो?
WhatsApp मा कसरी सम्पर्कको नाम परिवर्तन गर्ने
ग्यालक्सी फोल्डको लागि पहिलो केसहरू पहिले नै वास्तविक छन्